Ụdị ahịa ahịa ọdịnaya B2B | Martech Zone
Ọrịa ọjọọ ahụ mebiri usoro azụmaahịa ndị ahịa nke ukwuu ka azụmaahịa na-emegharị ihe gọọmentị mere iji nwaa igbochi mgbasa ngwa ngwa nke COVID-19. Ka emechiri ọgbakọ, ndị na -azụ B2B kwagara n'ịntanetị maka ọdịnaya na akụrụngwa mebere iji nyere ha aka site na nkebi nke njem onye na -azụ B2B.
Ndị otu na Digital Marketing Philippines achịkọtala infographic a, B2B Ọdịdị Mgbasa Ọdịnaya na 2021 nke na -eme ka ọnọdụ 7 dị n'etiti ka ndị ahịa ọdịnaya B2B siri meghachi omume na mgbanwe ụlọ ọrụ na mgbanwe omume:
Ọdịnaya Na -aghọkwu Ebumnuche - nkewa na ịhazi onwe ha abụrụla ihe dị mkpa ka ndị na -ere ahịa na -ele anya ịnye ahụmịhe ezubere iche. Njikwa ọdịnaya yana ikpo okwu akpaaka ahịa na ọgụgụ isi mmadụ na -enye teknụzụ dị mkpa iji mepụta ma tụọ ahụmịhe ndị a ezubere iche.
Ọdịnaya na -aghọkwu mmekọrịta na ahụmịhe - ọdịyo, vidiyo, ihe nkiri, ihe mgbako, gamification, eziokwu agbakwunyere, na eziokwu mebere na -akwalite ahụmịhe onye na -azụ B2B… na -enyere aka iduga ha na ntụgharị.
Oriri ọdịnaya site na ekwentị mbụ - O zughị iji wuo saịtị na -anabata nke a nwere ike ịhụ na ngwaọrụ mkpanaka mgbe ị rụchara nlele desktọpụ gị. Ọtụtụ ụlọ ọrụ na -agbanwe ọdịnaya na ahụmịhe ha na -ewetara ndị ọbịa mkpanaka.
Ahịa Ọdịnaya N'ọtụtụ Ọwa - Nzute ndị ọbịa ebe ha na -adị oke egwu ebe ndị na -azụ B2B nwere akụrụngwa enweghị njedebe. Ọ bụrụ na onye zụrụ gị nọ na ọwa mmekọrịta, ọ dị mkpa ka gị na ha nwee mmekọrịta. Ọ bụrụ na ha nọ na ụda (dịka. Pọdkastị), na -enye ozi dị mkpa. Ọ bụrụ na ha nọ na vidiyo, ọdịnaya gị nwere ike ịdị na YouTube.
Ahịa Ọdịnaya Na -achịkwa Ọchịchị Isi Iju ọdịnaya adịghị agwụ agwụ adịghị arụ ọrụ ka ụlọ ọrụ na -achọ iwu etiti, ọba akwụkwọ ọdịnaya zuru oke nke ahụ na-enye ọkachamara, ikike, na ntụkwasị obi ọdịnaya maka ndị na -azụ ahịa ka ha na -eme nyocha maka nsogbu ịma aka azụmaahịa ha.
Ọrụ Mmekọ ọdịnaya na -ejikwa arụmọrụ onye mmekọ -Ịkwalite mmekọrịta na ịkwalite ọdịnaya nke otu ndị na-ege ntị lekwasịrị anya bụ ụzọ dị mma ma dị irè iji rụpụta nsonaazụ azụmahịa.
Ahịa Ọdịnaya Dị ka Ọrụ Ezipụ - Ihe karịrị ọkara nke ụlọ ọrụ B2B niile ewepụtala ọdịnaya ha - na -ewe ndị ọkachamara nwere nyocha, imewe, idepụtaghachi ihe, na ike igbu nke nwere ike bụrụ nke a na -apụghị ị nweta n'ime.
Inyere akara hyperfocus na ịzụlite usoro ịzụ ahịa ọdịnaya n'ofe ọwa na ndị na -ajụ ase bụ ọrụ kacha amasị m na ndị ahịa. Ọtụtụ ụlọ ọrụ nwere usoro ọdịnaya nke na -enweghị atụmatụ etiti ọ bụla iji chụpụ nsonaazụ azụmahịa n'ezie. Ndị fesa ma kpee ekpere usoro mmepe ọdịnaya (dịka. Blọgụ X kwa izu) anaghị enyere azụmaahịa gị aka… ọ na -eme mkpọtụ na ọgba aghara.
Alala azụ ịkpọtụrụ m ma ọ bụrụ na ịchọrọ enyemaka. Anyị enyerela obere azụmaahịa B2B aka site na ụlọ ọrụ na -azụlite usoro ịzụ ahịa ọdịnaya iji chụpụ nsonaazụ. Ọ bụghị usoro dị mfe, mana ọ na -amị mkpụrụ nke ukwuu dịka azụmaahịa gị nwere ike wulite nhazi na ebumnuche n'azụ ọdịnaya niile ha mepụtara, melite ma nwughachi.
Nke a bụ ozi zuru ezu sitere na Digital Marketing Philippines:
Tags: isiokwuikikereb2bb2b onye na-azụ ahịab2b ọkwa nke onye zụrụ yab2b ọdịnayab2b ahia ahiab2b ọdịnaya ahia ahiab2b ọdịnaya ọdịnayandị na-azụ ahịa njemkpọọ ka emeỌbá akwụkwọ ọdịnayacontent Marketingcopywritingnkwalite obeahịa nnwetandị akaebe ndị ahịadesignọkachamaraọkachamarainfographicedu ọgbọonye ọdịnayangwaahịa demosmkparesearchelekọta mmadụ mediaochichi echichetụkwasị obikwesịrị ntụkwasị obivirtual eziokwuwhitepapers
Ihe ịrịba ama 7 ị chọghị sava mgbasa ozi
Etu esi esochi ntinye akwụkwọ Elementor na mmemme Google Analytics site na iji JQuery
Septemba 10, 2013 na 10:49 ehihie
Ọ ga-amasị m ịkọrọ ndị ibe m ihe a na G plus. Nke a ga-enyere ha aka n'ezie. 🙂